Sahia mandray an-tanana - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > toriteny > Raiso ny fiaramanidina
Fanoharana malaza momba an’i Jesosy: Nisy olona roa nankany amin’ny tempoly mba hivavaka. Ny iray Fariseo, ny iray mpamory hetra (Lioka 18,9.14). Amin’izao andro izao, roa arivo taona taorian’ny nanaovan’i Jesosy an’io fanoharana io, dia mety halaim-panahy handohalika amim-pahalalana isika ka hilaza hoe: “Eny tokoa, ry Fariseo, ohatra ny fanamarinan-tena sy ny fihatsarambelatsihy!” Eny ary ... fa aleo avelantsika ankilabao io fanombanana io ary hiezaka haka sary an-tsaina ny fiantraikan'ilay fanoharana tamin'ny mpihaino an'i Jesosy. Amin’ny lafiny iray: Ny Fariseo dia tsy noheverina ho mpihatsaravelatsihy be loatra ka tiantsika, Kristianina manana tantaram-piangonana nandritra ny 2000 taona, ny hiheverantsika azy ireny. Ny Fariseo kosa dia vitsy an'isa ara-pivavahana jiosy nafana fo, nafana fo, nafana fo, izay nanohitra tamin-kerim-po ny onjan'ny liberalisma, ny marimaritra iraisana ary ny syncretisme teo amin'ny tontolo romana niaraka tamin'ny kolontsaina grika mpanompo sampy. Niantso ny olona hiverina amin’ny lalàna izy ireo ary nianiana hiorina mafy amin’ny finoana amin’ny fankatoavana.
Rehefa nivavaka tamin'ilay fanoharana ny Fariseo hoe: "Misaotra an'Andriamanitra, fa tsy mitovy amin'ny olon-kafa aho", tsy fahatokisan-tena izany fa tsy vazivazy tsy misy dikany. Marina ilay izy. Ny fanajany ny lalàna dia tsy misy tsiny; izy sy ny Fariseo vitsy an'isa dia nanome toky ny lalàna ao amin'ny tontolo iray izay nihena haingana ny lanjan'ny lalàna. Tsy toa ny olon-kafa izy ary tsy mijery ny tenany akory - Misaotra an'Andriamanitra noho izy.
Etsy an-danin’izany: Ny mpamory hetra tany Palestina, dia nalaza ratsy indrindra — Jiosy nanangona ny hetra tamin’ny fireneny izy ireo ho an’ny fitondrana romanina, ary matetika no nanan-karena tamin’ny fomba tsy mendrika (ampitahao amin’ny Matio 5,46). Ny fizarana andraikitra dia ho nazava avy hatrany tamin’ny mpihaino an’i Jesosy: ny Fariseo, lehilahin’Andriamanitra, ho “tsara” ary ny mpamory hetra, ilay olon-dratsy, ho “ratsy”.
Toy ny mahazatra dia nanao fanambarana tsy nampoizina i Jesosy tao amin'ny fanoharany: izay misy antsika na inona no tokony hataontsika dia tsy misy fiatraikany tsara na ratsy amin'Andriamanitra; mamela ny heloky ny olona rehetra Izy, na dia ny mpanota indrindra aza. Ny hany tsy maintsy ataontsika dia ny matoky azy. Ary manaitra ihany koa: Izay mino fa marina kokoa noho ny hafa izy (na dia mety manana porofo mivaingana aza izany) dia mbola ao amin'ny fahotany ihany, tsy satria tsy namela azy Andriamanitra, fa satria tsy handray izay tsy ilainy izy manana finoana.
Vaovao mahafaly ho an'ny mpanota: ny filazantsara dia entin'ny mpanota fa tsy ny marina. Ireo olo-marina dia tsy mahatakatra ny tena fototry ny filazantsara satria mieritreritra izy ireo fa tsy ilaina io karazana filazan-tsara io. Ho an'ny olo-marina, toa ny vaovao tsara izay anjarany Andriamanitra. Lehibe ny fahatokisany an'Andriamanitra satria fantany fa miaina amin'ny fahatahorana azy kokoa izy noho ny mpanota hita miharihary eo amin'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny lela maranitra, dia manameloka ireo fahotana mahatsiravina ataon'ny hafa izy ary faly fa akaikin-dàlana amin'Andriamanitra fa tsy miaina tahaka ny mpanitsakitsa-bady, mpamono olona ary mpangalatra izay hitany eny an-dalana sy amin'ny vaovao. Ho an'ny olo-marina, ny filazantsara dia fitokonana fikomiana hanoherana ireo mpanota an'izao tontolo izao, fampahatsiahivana mampitolagaga fa ny mpanota dia tokony hampitsahatra ny ota ary miaina tahaka ny marina, dia miaina.
Tsy izany anefa ny filazantsara. Vaovao mahafaly ho an’ny mpanota ny filazantsara. Izany dia manazava fa Andriamanitra dia efa namela ny helony ary nanome azy ireo fiainana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy. Hafatra izay hahatonga ny mpanota ho reraky ny fanjakazakan’ny ota hipetraka sy handinika. Midika izany fa Andriamanitra, ilay Andriamanitry ny fahamarinana, izay noheveriny ho manohitra azy ireo (satria manana ny antony rehetra maha-izy azy), dia tena ho azy ireo ary tia azy ireo mihitsy aza. Midika izany fa tsy ataon’Andriamanitra amin’izy ireo ny fahotany, fa efa voavotra tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy ny ota, efa afaka tamin’ny fatoran’ny ota ny mpanota. Midika izany fa tsy mila miaina ao anatin’ny tahotra sy ny fisalasalana ary ny alahelon’ny feon’ny fieritreretana mandritra ny iray andro izy ireo. Midika izany fa azon’izy ireo atao ny manorina amin’ny hoe Andriamanitra ao amin’i Jesoa Kristy no hany nampanantenainy ho azy ireo - mpamela heloka, mpanavotra, mpamonjy, mpisolovava, mpiaro, namana.
Mihoatra noho ny fivavahana
Tsy mpanao soa ara-pivavahana iray fotsiny i Jesosy Kristy teo amin’ny maro. Tsy olo-malemy manga maso manana mendri-kaja izy, fa hevitra tsy araka an'izao tontolo izao momba ny herin'ny hatsaram-panahin'olombelona. Izy koa dia tsy mpampianatra ara-moraly amin'ny maro izay miantso ny olona "hiezaka hiezaka", ho amin'ny fanandratana ara-moraly ary andraikitra ara-tsosialy bebe kokoa. Tsia, rehefa miresaka momba an’i Jesosy Kristy isika dia miresaka momba ny loharano mandrakizain’ny zavatra rehetra (Hebreo 1,2-3), ary mihoatra noho izany: Izy koa no Mpanavotra, Mpanadio, Mpampihavana an’izao tontolo izao, izay nampihavana indray an’izao rehetra izao simba tamin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin’ny maty (Kolosiana). 1,20). Jesosy Kristy no namorona ny zava-drehetra misy, mitondra ny zava-drehetra misy amin'ny fotoana rehetra ary nizaka ny ota rehetra mba hanavotra izay rehetra misy - anisan'izany ianao sy izaho. Tonga teto amintsika Izy mba hahatonga antsika ho tahaka ny nahariany antsika.
Jesosy dia tsy mpanao soa ara-pivavahana iray eo amin'ny maro ary ny filazantsara dia tsy boky masina iray amin'ny maro. Ny filazantsara dia tsy fitsipika sy fomba fiasa ary torolalana vaovao sy nohatsaraina natao mba hahatonga ny toetr'andro ho tsara ho antsika ao anatin'ny olona ambony mora tezitra sy mora tezitra; izany no fiafaran’ny fivavahana. Ny "fivavahana" dia vaovao ratsy: milaza amintsika fa ireo andriamanitra (na andriamanitra) dia tezitra mafy amintsika ary mamela ny tenany ho tony amin'ny fanarahana hentitra ny fitsipika ary avy eo mitsiky amintsika indray. Tsy “fivavahana” anefa ny filazantsara: vaovao tsaran’Andriamanitra ho an’ny olombelona izany. Izy io dia manambara fa voavela ny ota rehetra ary ho sakaizan’Andriamanitra ny lehilahy sy vehivavy ary ny zaza rehetra. Manome tolotra fampihavanana lehibe tsy misy fepetra izy io, ambara tsy misy fepetra ho an'izay mahay mino sy manaiky izany (1. Johannes 2,2).
"Nefa tsy misy na inona na inona amin'ny fiainana an-kalalahana", hoy ianao. Amin'ity tranga ity dia misy maimaimpoana. Izy no lehibe indrindra amin'ny fanomezana tsy takatry ny saina rehetra ary manana fiainana mandrakizay. Ny hahatrarana izany dia zavatra iray ihany no ilaina: matoky ny mpamatsy vola.
Halan'Andriamanitra ny ota - tsy isika
Ny antony iray dia tsy ankahalan'Andriamanitra ny ota - satria manimba antsika sy ny zava-drehetra manodidina antsika izy io. Hitanao fa Andriamanitra dia tsy handringana antsika satria mpanota; mikasa ny hamonjy antsika amin'ny ota manimba antsika Izy. Ary ny tena tsara indrindra - dia efa nataony izany. Efa tao amin'i Jesosy Kristy izy io.
Ratsy ny ota satria mampisaraka antsika amin’Andriamanitra. Mahatonga ny olona hatahotra an’Andriamanitra izany. Manakana antsika tsy hahita ny zava-misy amin'ny maha-izy azy izany. Manapoizina ny hafaliantsika izany, manakorontana ny laharam-pahamehantsika, ary mamadika ny fahatoniana, ny fiadanana ary ny fahafaham-po ho korontana, tahotra ary tahotra. Mahatonga antsika ho kivy amin'ny fiainana izany, ary indrindra rehefa mino isika fa maniry sy mila izay tena tratrantsika sy ananantsika. Halan’Andriamanitra ny ota satria manimba antsika izany – saingy tsy mankahala antsika Izy. Tia antsika Izy. Izany no antony nanaovany zavatra hanoherana ny ota. Ny nataony: namela ny helok’izao tontolo izao Izy (Jao 1,29) - ary nataony tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy izany (1. Timoty 2,6). Ny maha-mpanota antsika dia tsy midika fa Andriamanitra dia manome antsika ny soroka mangatsiaka, araka ny ampianarina matetika; Misy vokany izany, satria isika mpanota, dia niala tamin’Andriamanitra, lasa tafasaraka taminy. Fa raha tsy misy azy dia tsinontsinona isika - ny maha-olona antsika manontolo, ny zavatra rehetra izay mamaritra antsika dia miankina aminy. Koa miasa toy ny sabatra roa lela ny ota: amin’ny lafiny iray, manery antsika hiamboho an’Andriamanitra noho ny tahotra sy ny tsy fahatokisana, ny mandà ny fitiavany; amin'ny lafiny iray, mamela antsika ho noana amin'izany fitiavana izany indrindra. (Ny ray aman-drenin'ny tanora dia hiombom-pihetseham-po amin'izany indrindra.)
Ny ota navotana tao amin'i Kristy
Angamba tamin'ny fahazazanao dia nahazo hevitra avy amin'ny olon-dehibe manodidina anao ianao fa Andriamanitra dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana amin'ny maha-mpitsara henjana antsika, ka mandanja ny ataontsika tsirairay, vonona hanasazy antsika raha tsy manao ny zava-drehetra araka ny tokony ho izy zato isan-jato. ary izay ataontsika dia tokony hanokatra ny vavahadin'ny lanitra isika. Ny Filazantsara izao dia manome antsika ny vaovao mahafaly fa Andriamanitra dia tsy mpitsara hentitra velively: tsy maintsy mitodika tanteraka amin’ny endrik’i Jesosy isika. Jesosy - lazain'ny Baiboly amintsika - dia ny endrik'Andriamanitra tonga lafatra ho an'ny mason'olombelona ("endriky ny tenany", Hebreo 1,3). Tao aminy no nahatongavan’Andriamanitra “nandratra ny tenany”, tamin’ny maha-iray amintsika azy, mba hampisehoana amintsika ny toetrany, ny fitondrany, ny firaisana aminy ary ny antony; ao aminy no ahafantarantsika an’Andriamanitra, dia Andriamanitra Izy, ary eo an-tanany no ametrahana ny raharahan’ny mpitsara.
Eny, nataon’Andriamanitra ho mpitsara an’izao tontolo izao i Jesosy, saingy mpitsara hentitra izy. Mamela ny mpanota Izy; Izy no “mitsara”, izany hoe tsy manameloka azy ireo (Jo 3,17). Ho voaozona ihany izy ireo raha tsy mety mangataka famelan-keloka aminy (and. 18). Ity mpitsara ity dia mandoa ny sazin'ireo voampanga amin'ny paosiny (1. Johannes 2,1-2), manambara fa maty mandrakizay ny heloky ny olona rehetra (Kolosiana 1,19-20) ary avy eo dia manasa an'izao tontolo izao ho amin'ny fankalazana lehibe indrindra amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Afaka mipetraka tsy misy farany isika izao miady hevitra momba ny finoana sy ny tsy finoana ary iza no tafiditra ary iza no voailika amin'ny fahasoavany; na avelantsika ho azy izany rehetra izany (eo am-pelatanana izany), afaka mitsambikina sy mitsambikina ho amin’ny fankalazana azy isika, ary eny an-dalana dia mitory ny vaovao mahafaly amin’ny olona rehetra ary mivavaka ho an’izay rehetra mandalo ny lalantsika.
Fahamarinana avy amin'Andriamanitra
Ny filazantsara, ny vaovao tsara, dia milaza amintsika hoe: efa an'i Kristy ianao - raiso. Ankafizo izy. Matokia azy amin'ny fiainanao. Ankafizo ny fiadanany. Avelao ny masonao hisokatra ho an'ny hatsarana, ny fitiavana, ny fandriam-pahalemana, ny fifaliana eto an-tany izay tsy hitanao afa-tsy ireo izay miala amin'ny fitiavan'i Kristy ihany. Ao amin’i Kristy no ananantsika ny fahafahana hiatrika sy hanaiky ny fahotantsika. Satria matoky azy isika, afaka miaiky ny fahotantsika isika ary matahotra eo an-tsorony. Momba antsika Izy.
“Mankanesa atỳ amiko”, hoy i Jesosy, “izay rehetra mavesatra entana sy mavesatra entana; Te hamelombelona anao aho. Ento ny ziogako ka mianara amiko; fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa malefaka ny ziogako ary maivana ny entako » (Mat 11,28- iray).
Rehefa miala sasatra ao amin’i Kristy isika dia tsy mandrefy ny fahamarinana; Afaka miaiky ny fahotantsika aminy amim-pahatsorana sy amim-pahamarinana isika izao. Ao amin’ny fanoharan’i Jesosy momba ny Fariseo sy ny mpamory hetra (Lioka 18,9-14) Ny mpamory hetra mpanota izay manaiky tsy an-kijanona ny fahotany ary maniry ny fahasoavan’Andriamanitra no hamarinina. Ilay Fariseo - nanolo-tena ho amin'ny fahamarinana hatrany am-piandohana, saika mitahiry ny firaketana an-tsoratra momba ny fahombiazany masina - dia tsy mijery ny fahotany sy ny filany mafy ny famelan-keloka sy ny fahasoavana mifanaraka amin'izany; noho izany dia tsy maninjitra sy mandray ny fahamarinana izay avy amin’Andriamanitra ihany izy (Romana 1,17; 3,21; Filipianina 3,9). Ny “fiainany ara-panahy araka ny fitsipika” indrindra no manafina ny fahitany ny halehiben’ny filany ny fahasoavan’Andriamanitra.
Ao anatin’ny fahotantsika lalina indrindra sy ny faharatsiam-panahintsika, dia tonga hitsena antsika amin’ny fahasoavana i Kristy (Romana). 5,6 ary 8). Eto, ao anatin'ny tsy rariny maizimaizina, miposaka ho antsika ny Masoandron'ny fahamarinana mitondra famonjena eo ambanin'ny elany (Mal. 3,20). Rehefa mahita ny tenantsika ho ao anatin’ny tena ilaintsika isika, tahaka ny mpamory hetra sy mpamory hetra ao amin’ny fanoharana, dia rehefa ny vavaka ataontsika isan’andro dia mety ho “Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota”, amin’izay vao afaka miaina amim-pahalemem-panahy isika. ny hafanan’ny famihin’i Jesosy manasitrana.
Tsy misy zavatra tokony hanaporofoantsika an'Andriamanitra. Mahafantatra antsika tsara lavitra noho ny fantatsika ny tenantsika Izy.F Fantany ny fahotantsika, fantany ny ilantsika famindram-po. Efa nataony avokoa izay rehetra hataontsika mba hahazoana antoka ny fisakaizantsika mandrakizay. Afaka mandry ao amin'ny fitiavany isika. Afaka matoky ny teniny famelan-keloka isika. Tsy mila tonga lafatra isika; mila mino azy sy mino azy fotsiny isika. Tian'Andriamanitra ho sakaizany isika, fa tsy kilalao elektronika na miaramila an'iny. Mitady fitiavana izy, fa tsy fankatoavana ny fatin-dàlana sy ny stamina amin'ny fandaharana.
Minoa, fa tsy mandeha
Ny fifandraisana tsara dia mifototra amin'ny fifampitokisana, ny fifamatorana maharitra, ny tsy fivadihana ary indrindra ny fitiavana. Ny fankatoavana madio dia tsy ampy ho fototra (Romana 3,28; 4,1-8e). Ny fankatoavana dia manana ny toerany, saingy - tokony ho fantatsika - dia iray amin'ireo vokatry ny fifandraisana izany, fa tsy iray amin'ireo antony mahatonga izany. Raha miorina amin’ny fankatoavana fotsiny ny fifandraisany amin’Andriamanitra, dia latsaka ao anatin’ny fiavonavonana manakana toy ny Fariseo ao amin’ny fanoharana izy na amin’ny tahotra sy ny fahasorenana, arakaraka ny fahatsoram-pony eo amin’ny famakiana ny ambaratongan’ny fahatanterahan’ny tena amin’ny ambaratonga fahatanterahana.
CS Lewis dia manoratra ao amin'ny Christianity Par excellence fa tsy misy dikany ny milaza fa matoky olona ianao raha tsy mandray ny toroheviny. Lazao hoe: Izay matoky an’i Kristy dia hihaino ny toroheviny koa ka hampihatra izany araka izay tratrany. Fa na iza na iza ao amin'i Kristy, izay matoky azy, dia hanao izay fara heriny tsy hatahotra ny holavina raha tsy mahomby. Matetika izany no mitranga amintsika rehetra (tsy fahombiazana, ny tiako holazaina).
Rehefa miala sasatra ao amin’i Kristy isika, ny ezaka ataontsika handresena ny fahazarantsika sy ny saintsika feno fahotana dia lasa toe-tsaina manolo-tena miorina amin’Andriamanitra mahatoky mamela heloka sy mamonjy antsika. Tsy nanipy antsika ho amin’ny ady tsy misy farany ho amin’ny fahatanterahana Izy (Galatianina 2,16). Mifanohitra amin’izany kosa, mitondra antsika amin’ny fivahinianan’ny finoana izay ianarantsika hanesorana ny fatoran’ny fanandevozana sy ny fanaintainana izay efa nanafahana antsika (Romana). 6,5-7). Tsy voaheloka ho amin'ny tolona Sisyphean ho amin'ny fahatanterahana izay tsy azontsika resena isika; fa hahazo ny fahasoavan’ny fiainam-baovao izay ampianaran’ny Fanahy Masina antsika hifaly amin’ny toetra vaovao, noforonina tamin’ny fahamarinana ary niafina niaraka tamin’i Kristy tao amin’Andriamanitra (Efesiana). 4,24; Kolosiana 3,2-3). Efa nanao ny mafy indrindra Kristy - ny maty ho antsika; tsy mainka va ny hanao zavatra moramora kokoa, dia ny hitondra antsika hody (Romana 5,8-10)?
Mino izany isika ao amin’ny Hebreo 11,1 dia ny fahatokiantsika mafy ny amin’izay antenaintsika, izay malalan’i Kristy. Amin'izao fotoana izao, ny finoana no hany tena azo tsapain-tanana, tena fisehoan'ny soa nampanantenain'Andriamanitra - ny tsara izay miafina amin'ny retsika dimy. Raha lazaina amin’ny teny hafa, amin’ny mason’ny finoana no ahitantsika toy ny efa nisy teo, ilay tontolo vaovao mahafinaritra izay sariaka ny feo, malemy fanahy ny tanana, be hanina ary tsy misy vahiny. Hitantsika izay tsy ananantsika porofo azo tsapain-tanana sy ara-batana ao amin’ny tontolon’ny ratsy ankehitriny. Finoana ateraky ny Fanahy Masina, izay mampirehitra ao anatintsika ny fanantenana ny famonjena sy ny fanavotana ny voary rehetra (Romana 8,2325), dia fanomezana avy amin’Andriamanitra (Efes 2,8-9), ary ao aminy no itoerantsika ao amin’ny fiadanany, ny fitonianany ary ny hafaliany noho ny fahatokiana tsy takatry ny saina momba ny fitiavany mihoa-pampana.
Efa nandray ny dian'ny finoana ve ianao? Ao anatin’ny kolontsain’ny vavonin’ny vavony sy ny fiakaran’ny tosi-drà, ny Fanahy Masina dia mamporisika antsika amin’ny lalan’ny fahatoniana sy ny fiadanana eo an-tanan’i Jesosy Kristy. Vao mainka aza: Ao anatin’ny tontolo mampatahotra feno fahantrana sy aretina, hanoanana, tsy rariny feno habibiana ary ady, Andriamanitra dia miantso antsika (ary manome fahafahana antsika) hitarika ny masontsika mino ho amin’ny fahazavan’ny teniny, izay mamarana ny fanaintainana, ny ranomaso, ny fanjakazakana sy ny fahafatesana ary ny famoronana tontolo vaovao izay itoeran'ny rariny ao an-trano, hoy ny fampanantenana (2. Petrus 3,13).
"Matokia ahy," hoy i Jesosy amintsika. “Na inona na inona hitanao, hataoko vaovao ny zava-drehetra - anisan'izany ianao. Ajanony ny ahiahy ary miantehitra amiko fa izany fotsiny no nolazaiko ho anao, ho an'ireo havanao ary ho an'izao tontolo izao. Aza manahy intsony ary miantehitra amin'ny zava-misy fa hanao araka izay nolazaiko ho anao aho, ho an'ny olon-tianao sy ho an'izao tontolo izao. »
Afaka matoky azy isika. Azontsika atao ny mametraka ny enta-mavesatsika eo an-tsorony - ny enta-mavesantsika ny ota, ny vesatry ny tahotra, ny vesatry ny fanaintainana, ny fahadisoam-panantenana, ny fisavoritahana ary ny fisalasalana. Hitondra azy ireo ny fomba nitondrany sy mitondra antsika talohan'ny nahafantarantsika azy ireo.
Nataon'i J. Michael Feazel